mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast52 ArmyMeya Güler Akaongorora Çambaşı Plateau Bungalow Dzimba
08 / 01 / 2020 52 Army, PHOTOS, GENERAL, Turkish Black Sea Coast, TURKEY, TELPHER
guler cambasi yaylasi bungalow dzimba dzinoongorora
Meya weOrdu Metropolitan Municipality Mehmet Hilmi Guler, Kabaduz dunhu re Çambaşı Plateau yakavakwa mukuferefetwa kwakawanikwa mukati meBungalows.
Bungalows, iyo yakanga ichangovhurwa mu Çambaşı Plateau, yakawana kufarirwa nemunhu wese kubva pa7 kusvika 70 vaida kubva kure nekunetseka kweguta. Iwo mabalalows anokwezva kutarisa nekunyaradza kwavo uye dhizaini yakashamisa vanoshamisika ivo vanoona vagari vane avo akasiyana chimiro maonero. Panguva imwecheteyo, iyo bungalows yechando-inotungamirirwa nechando inotakurwa nevagari vachinakidzwa nerwendo rwakasiyana.
"Kwete TURKEY, vanokumbira KUTI NERESİ BUR zviri WORLD"
The bungalows vari chete kutaura kuuya inzwi mabasa munyika kwete Turkey Army Metropolitan Mayor Dr. Mehmet Hilmi Güler akati, ız Tinoenderera mberi nekuedza kwedu kuvandudza nguva yechando kushanya muOrdu uye kuita kuti Ordu ive inowoneka mumwaka wega wega. Muchirevo chechinyorwa ichi, takavaka bungalows mu Çambaşı Plateau inova imwe yenzvimbo dzinodiwa dzeOrdu mumwaka wezhizha uye yechando. Ino nzvimbo yakagadzirirwa kunyatsogadzirwa. Hapana nyaradzo. Nekuvhurwa kwemabhurows, munhu wese airatidza kufarira zvikuru kubva pa7 kusvika 70. Kwete chete kubva Turkey, vari kubvunza aripi kuti nazvo nyika. Kusvika muna Chivabvu, zvese zvatinochengeta zvazara. Naizvozvo, isu tichawedzera vatsva kune bungalows pane inorema kudiwa. Iri ibasa risinganzwisisike. Kana ndichida kupa chinyorwa kune bungalows, i hotera nyeredzi 5. Kupera
"5 STAR HOTEL ANOGONESESWA KUCHAKA CHEMA"
Vachitaura kuti zvivimbiso zvinochengetwa imwe neimwe, Meya Güler akati, 5 Mahotera edu e5 hotera anoenderera mu Çambaşı Yaylamız. Iko kuvaka kwakashata kwapera uye pasi wechiXNUMX kwasvikwa. Pashure pacho, mirairo yezvakatipoteredza inotangwa. Maturu edu anoshanda anoenderera pano. Nemapurojekiti edu, Ordu iri kukurumidza kuenda kune guta reOrdu. Tinochengeta zvatakavimbisa ”.
Meya Güler: Çambaşı Ski Center Ichawana kukosha kwayo
Bungalow Kuvaka Kwakatangwa ku Çambaşı Doğa Zvivako
Rwendo Rutsva rweZima Tourism Çambaşı Plateau
Çambaşı Plateau Ski Resort iri kufambira mberi nokukurumidza
Zuva rekudenga rinouya kuAkambaşı Plateau
Çambaşı Plateau uye gungwa zvinopindirana neropeway
Çambaşı Plateau Ski Facilities kuti igovhurwa muna December
Çambaşı Plateau Inoshandiswa pa EMİTT
Kudzidziswa kwe Çambaşı Plateau Ski Center Vashandi
5 Star Hotel pane Çambaşı Plateau
Meya Guler: 'Koyteyner Port ichavandudza Unye'
Meya Guler 'Tiri kukurukura naSamsun Sarp Railway'
Guler weNyika: Orphan Gülerse World Photography Exhibition Inoshandiswa muTünel
Çambaşı Plateau Bungalow Dzimba
Bülent Ecevit Junction Migwagwa Yakapera
Van Che Cheki Yekutakura Vazhinji Mota